Iindaba -I-YALIS ithathe inxaxheba kwi-CIDE 2021
I-Ara yendlu yonke yokwenza ulwakhiwo iza
Ngophuculo olupheleleyo lwamanqanaba okusetyenziswa kunye nokuhlaziywa okuqhubekayo kweekhonsepthi zokusetyenziswa, ukwenziwa kwendlu iphela kuye kwaba yinto engenakuphikwa yokusetyenziswa kwekhaya. I-China lilizwe elinenani elikhulu kakhulu lolwakhiwo olutsha emhlabeni, lubala malunga ne-40% yolwakhiwo olutsha lonyaka. Umboniso we-China International Door Industry Exhibition (CIDE) waziwa ngokuba yi "vane and booster of development development", ethe yakhuthaza kakhulu ukutshintshiselana kwamashishini kunye nentsebenziswano kurhwebo. Iyakhuthaza kwaye ingqina lokuchuma kwishishini lomnyango kunye nemarike yekhaya eyenziwe ngokwezifiso.
Ngomhla we-6 kuMeyi, ngo-2021, yavulwa kakhulu kwi-China International Exhibition Centre iTianzhu Hall, eBeijing. Umboniso wenze uhlengahlengiso oluhle. Indawo yomboniso yahlulwe yangamacandelo emiboniso ephambili njengokulungiswa kwendlu iphela, ikhaya elineengcango, iingcango zomthi (iwindow), izixhobo zekhompyutha, kunye nezixhobo zokwenza izinto ezikrelekrele, ezinokuthi zijolise ngakumbi kumxokelelwane wenyukayo naphantsi komzi mveliso, kunye nokukhuthaza ababonisi kunye neendwendwe.
Njengomhlobo wakudala we-CIDE, YALIS ukuhambelana namazwi ngokuqinisekileyo ungabikho. Kulo mboniso, i-YALIS idokodo yayisagcwele ukuthandwa. U-YALIS wayezilungiselele kakuhle kwaye wazisa iintlobo ngeentlobo zeemveliso ezintsha, kubandakanya nezisombululo zeminyango, izixhobo zeentsimbi zomnyango kunye nezitshixo zeminyango eyi-smart. Uninzi lweengcango ezintsha zeminyango zibonakala phakathi kweempawu ezininzi zekhompyuter ngeziphelo zazo eziphezulu, zemozulu kunye nokuyilwa kwebanga eliphezulu, ukutsala ababonisi abaninzi kunye nabathengi ukuba bayeke ngamava kunye notshintshiselwano olunzulu.
Amagqabantshintshi amaninzi eMiboniso
Ngokuphucuka okuqhubekayo kwemigangatho yokuphila kwabantu, iimfuno zokuhombisa ikhaya ziya zisiba phezulu, kwaye iingcango zangaphakathi ngokuthe ngcembe ziyaphucuka ziye kuluntu kunye nokwahluka. Ukusuka kwiminyango eyomeleleyo yomthi kunye neengcango zeglasi, kwiingcango ezingabonakaliyo, iingcango eziphakamileyo, iingcango zeprofayili, iingcango zeglasi zesakhelo njalo njalo. Ke ngoko, ikwakhuthaze ukuba umzi mveliso wehardware wenze utshintsho olufanayo. I-YALIS ivelise izisombululo zeminyango ehambelana neengcango ezahlukileyo, ezingazisi kuphela abenzi beminyango ephezulu ukonyuka kwexabiso elongeziweyo leemveliso, ukonyusa ukusebenza kweengcango, kodwa ikwahlangabezana neemfuno zobuhle zabathengi.
Umzekelo, kwiminyango yeglasi yesakhelo esincinci, uyilo lwezibambo zeglasi kwimarike yanamhlanje azinakho ukuhlangabezana neemfuno zabenzi beminyango yeglasi. Ngophando oluninzi lwentengiso, u-YALIS wafunda ukuba abavelisi beminyango yeglasi banamanqaku eentlungu ekukhetheni isitshixo seminyango yeglasi, njengokulungiswa kobunzima bangaphakathi, iinketho ezimbalwa, kunye nokuthelekisa okunzima kwezitayile. Ke ngoko, u-YALIS waphule isiko kwaye wayila u-NO. 292 uthotho lweglasi yokutshixa ucango, NO.272 ucango lweglasi yokutshixa ucango kunye nolunye ucango lweglasi, ukudibanisa ukusebenza kunye nobugcisa bobugcisa behardware kunye neengcango zeglasi zibe yenye, ekubuyiseleni elubala kakhulu ukuphela kokuvalwa kweengcango zeglasi zesakhelo esincinci.
Ngokubhekisele kwiminyango yeplanga, izivalo zokubamba iingcango ezinokuthelekiswa ngokugqibeleleyo kunye nezinto ezahlukeneyo kunye nemibala yeengcango ukomeleza iziphumo ezibonakalayo ezibonakalayo lukhetho olushushu kwimarike. Ke ngoko, i-YALIS isandula ukwaziswaIIMPAWU EZININZI, UTHOBOZO, UCAMILEON Olunye uthotho lwezibambo zokubamba iingcango.
Ewe kunjalo, ukongeza kumagqabantshintshi aziswe apha ngasentla, lo mboniso uza kubonisa iintlobo ngeentlobo zeemveliso ezintsha kunye nolwakhiwo olutsha. Nge-CIDE, siziqonda ngcono iimfuno zabathengi bethu, kwaye sizithembe ngakumbi kwixa elizayo. Sijonge ukuhlangana nawe kwixesha elizayo!